ႏိုင္ငံေရးသမား – Min Thayt
သတင်းစာဆရာ နှင့် နိုင်ငံရေးသမား… အပြန်အလှန် ထိန်းထိန်းညှိညှိ…. နိုင်ငံရေးသမားက၊ ဆင်လိုပဲ။ အရေထူတယ်။ တော်ရုံနဲ့ ပြုတ်မနူးဘူး။ စုန်းပြူးလို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒီစကားက၊ နားထဲဝင်တာ နုပ်လို့။ ပြီးတော့၊ ကန့်လန့်ကြီး ဝင်သွားတော့… အဝင်ဆိုးတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆိုတာ၊ ကလောင်နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရလို့ ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း ရေးတာ ဖတ်ဖူးတယ်။ စာနယ်ဇင်းမဏ္ဍိုင်ကို၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ဆိုကြတယ်...
နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခံယူသူများအတွက်၊ အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နှင့် ဖုံးလိုက်ခြင်း….
နိုင်ငံရေးသမားဟာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ် ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ရမယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် အာဏာ ရှိလာပြီဆိုရင်၊ သူ့လုပ်ရပ်ဟာ သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ဘူး။ အများနဲ့ ဆိုင်လာ ပြီ။ အများကို သက်ရောက်လာနိုင်ပြီ။ ဒ့ါကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူအဖို့၊ သူ့လုပ်ရပ်တွေကို သာမန်လူတစ် ယောက်ထက် ပိုပြီး ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှု လုပ်နိုင်ရမယ်။ ဒါမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းသော အကျိုး ရလဒ်ကို ဖန်တီးထားနိုင်မယ်။...
နိုင်ငံရေးသမားအတွက် ကျောင်းရှိသလား…. အာဏာရဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသတ္တဝါတိုင်းကို နိုင်ငံရေးသမားလို့ ယေဘုယျသတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အတွက် လေ့လာစရာ၊ သင်ယူစရာ ကွင်းဟာ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အဖို့ လူ့အရေးအရာကိစ္စတိုင်းဟာ လေ့လာသင်ယူစရာတွေချည်းပါပဲ။ လူနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မြေကိစ္စတွေဟာ လေ့လာစရာတွေချည်းပါပဲ။ လူနဲ့မြေကို ပေါင်းထားတဲ့ နိုင်ငံ့အရေးအရာကိစ္စ တွေဟာ လေ့လာသင်ယူစရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနဲ့မြေကြီးကိစ္စတွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အစိုးရကိစ္စ၊...